Iindlela ezi-3 zoKwakha iNkqubo yokuThengisa eyiNtloko | Martech Zone
Iincoko ze-AI zinokuvula umnyango kumava edigital angcono kunye nokwanda kokuguqulwa kwabathengi. Kodwa banakho nokukwenza amava akho kumthengi. Nantsi indlela yokuyifumana ngokuchanekileyo.
Abathengi banamhlanje balindele ukuba amashishini azise amava abo kunye nokufunwayo iiyure ezingama-24 ngosuku, iintsuku ezisixhenxe ngeveki, iintsuku ezingama-365 zonyaka. Iinkampani kuwo onke amashishini zifuna ukwandisa indlela yazo ukuze zinike abathengi ulawulo abalufunayo kunye nokuguqula ukungena konxibelelwano oluphezulu lube kukuhlawula abathengi.
Ukuhlangabezana nale mfuno, amashishini amaninzi aphethukele kwiiarhente zencoko ezikrelekrele. Iincoko zixhotyiswe ngokukodwa ukuqhuba iingxoxo ezizezomntu kunye nangoko, ukuhlangabezana neemfuno zabo ngelixa ngaxeshanye ziqhubela phambili kuhambo lomthengi. Ingxoxo elungileyo inokuvumela abathengi bakho ukuba babuze nawuphi na umbuzo ngesiNgesi esicacileyo endaweni yokuba babambe iphepha lemveliso, iiposti zebhlog, kunye nomxholo okhutshelweyo ukufumana iimpendulo abazifunayo. Isicwangciso sokuncokola esinobunkunkqele sinokudonsa idatha yabathengi esele ikhona kwincoko ukuze bakhonze iimfuno zabo kwaye baqhubele phambili nohambo lwabo.
Nangona kunjalo, izisombululo zencoko ngaphakathi kwaye ngokwazo aziyiyo panacea. Ngelixa iincoko ezisebenzayo zibonise ukonyusa ukuguqulwa kwe-Intanethi ngama-20 ukuya kuma-30 epesenti, inkqubo yengxoxo engacwangciswanga kakuhle ngamanye amaxesha inokwenzakalisa ngakumbi kunokulunga. Kodwa xa inkqubo yengxoxo icwangciswe ngononophelo kwaye yenziwa ngobuchule, yenza ukuba kube lula ukuba amashishini aqhubele phambili ngokukhawuleza, ngokufanelekileyo nangokufanelekileyo.
1. Beka Abaphulaphuli Bakho Kuqala
Xa uyila umncedisi wakho wengxoxo ye-AI, cinga ngentengiso yakho. Kuya kufuneka uyile iarhente yakho ngokusekwe kulowo ubaziyo abathengi bakho ukuba babekhona, kubandakanya nokuqonda kwakho isitayile sencoko yabo. Ngaba abaphulaphuli bakho bayabuthanda uburharha kunye nomtsalane? Okanye ngaba bakhetha ukuya ngqo kwinqanaba? Nje ukuba wazi ukuba uthetha nabani, uya kuba nakho ukumisela ubuntu bearhente kunye nelizwi lakho.
Sele siyazi ukuba ukwenziwa komntu ngoyena ndoqo kunxibelelwano lwengxoxo ...
Iipesenti ezingama-80 zabathengi bathi banakho ukuthenga kwinkampani ebonelela ngamava alungiselelwe.
Izibalo ezingama-50 ezibonisa amandla oMntu
Kukho iindlela ezingenakubalwa zokwazisa uthinte umntu. Qala ngokubhekisa kubathengi ngamagama kwaye ubabuze malunga nezinto abazithandayo ukubanceda bafumane imveliso okanye inkonzo yakho eyenzelwe iimfuno zabo. Okukhona usazi malunga nomthengi wakho, kuya kuba lula ukuyilungisa inkxaso yabo engxoxweni.
Ubukrelekrele bokuzenzela (AI) iarhente inokusebenzisa idatha yendawo ukunceda ukufumanisa indawo ezifanelekileyo, umzekelo, okanye ukukhumbula imihla yokuzalwa kunye neziganeko ezizodwa zokubonelela ngezaphulelo kunye nemiyalezo yokubhiyozela ngokwesiko. Kodwa ukubhalwa komntu akunakudlula ukubaluleka; ukuba umthengi ufuna inkxaso yezobuchwephesha, umncedisi wakho wengxoxo okrelekrele akufuneki abanyanzele ngefowuni yokuthengisa. Qiniseka ukuba ujongana nenjongo echaziweyo yabathengi, nokuba oko kuthetha ukuphendula imibuzo ngokuthe ngqo okanye ukubonelela ngonxibelelwano lwezixhobo eziluncedo.
Enye into ebalulekileyo yokuziqhelanisa nengxoxo kukufutshane. Nikezela ngeempendulo ezilinganayo zokuluma ukugcina abathengi kwindawo yabo endaweni yokubachasa ngokhetho, kwaye uphendule imibuzo ngokubanzi eneenkcukacha ezithile zeakhawunti xa kunokwenzeka. Ngale ndlela, iarhente yakho iya kubandakanya ukwenziwa komntu kunye nokubaluleka kweempendulo ezimfutshane ezidibana kwaye zilindele iimfuno zabathengi bakho zexesha langempela.
2. Yenza iincoko eziluncedo nezinomdla eziTshintsha
Ukuze uqiniseke ukuba iarhente yakho yengxoxo iluncedo kangangoko kunokwenzeka, kufanelekile ukwenza imephu yokuhamba kwengxoxo. Khawufane ucinge indlela unxibelelwano nabathengi bakho olunokuthi luvele ngayo kwaye ucwangcise kwangaphambili kwiziphumo eziyimpumelelo, iziphelo ezingasasebenziyo, kunye neendlela zokuzibandakanya kwakhona kuxhomekeke kwiimpendulo ezinokubakho.
Emva koko yakha isiseko solwazi esinokuncedwa ngumncedisi wakho we-AI ukuze agqibe oko kuhamba ngengxoxo ngokufanelekileyo. Izinto ezingaphezulu kwisiseko sakho solwazi zibangcono; ungafaka imiyalezo esemgangathweni, imibuzo ebuzwa rhoqo, amakhonkco aluncedo, iinkcazo zemveliso, nokunye okuninzi. Ukuba iqonga lakho lengxoxo liyakwazi ukuphatha umxholo wemultimedia, unokucwangcisa ezo zinto zibonakalayo kwisiseko solwazi lwakho. Umzekelo, ii-GIF, iividiyo, izitikha, iigraphics, amaqhosha, kunye nezinye iindlela ezinomxholo osisityebi weendaba zinokuphakamisa incoko kwaye zibenze ukuba batsibe kwiscreen.
Umxholo wemithombo yeendaba osisityebi unceda ukufaka iiarhente zencoko ezikrelekrele ngobuntu kunye nokwenza amava angalibalekiyo kubathengi, kodwa soloko ukhumbula injongo yencoko. Ukubeka phambili ukucacisa malunga neenjongo zomthengi wakho (kunye namandla earhente yakho) kuya kuqinisekisa ukoneliseka kwaye ubancede bafike apho baya khona; Ii-GIF kunye nezincamathelisi kufuneka zibe kukucofa kwikhekhe.
3. Yiphephe imigibe eqhelekileyo yabancedisi bencoko
Enye yeenzuzo ezinkulu zabancedisi bokuncokola abakrelekrele kukuba bayangcono ekuhambeni kwexesha. Iiarhente ezinikwe amandla yi-AI ziya kufunda ngamava kwaye ziphucule njengoko zigqiba izingxoxo ezingakumbi nangakumbi. Ngale nto ithethwayo, ayilombono ulungileyo ukuseta ingxoxo engafundiswanga evulekileyo kubathengi bokwenyani. Yenza ukuba abasebenzi bakho bavavanye iarhente yakho ngaphakathi ngaphambi kokuba bayenze ifumaneke kubaphulaphuli bovavanyo kwaye ekugqibeleni bayikhulule eluntwini. Kuya kufuneka uqhubeke ngokubeka iliso kwintsebenzo kwaye uqokelele ingxelo ukuze uqiniseke ukuba iarhente yakho iyaphucuka kwaye iyafunda, nkqu nasemva kokumiliselwa.
Ukuze ubeke esweni ngempumelelo iarhente yakho ekrelekrele, thatha isigqibo malunga neemetriki zentsebenzo oza kuzilandela ukusukela kusuku lokuqala. Misela ukuba uza kuyilinganisela njani impumelelo kwaye uchonge ii-KPI ezinje ngencoko iyonke, inqanaba lokuzibandakanya, ixesha, kunye nokunikezelwa kunye nenqanaba lokubuyela umva. Oko kuya kukunceda ukuba wenze i-guardrails ye-arhente yakho ukuze uqhubeke nokuphucula usukelo lwayo, uhlala usenza ingqibelelo yengxoxo.
Nokuba ungachaneka kangakanani na iarhente yakho ye-AI, abathengi ngamanye amaxesha bafuna i-intuitive off-ramp kolunye uhlobo lonxibelelwano. Smooth phezu kwesandla ukuya kwindawo yentengiso, iarhente ebukhoma, okanye idilesi ye-imeyile ezinikeleyo ukwenza utshintsho olulula nolungenamthungo kunye nokuthintela ukukhathazeka kwabathengi okanye ukulahla. Nokuba i-ramp-off kufuneka incede abathengi bafezekise iinjongo zabo ezichaziweyo kwaye babahambise ngefaneli.
Nokuba yeyiphi na imboni okuyo kwaye nabaphi na abathengi bakho, ingxoxo ekrelekrele yokukhulisa yindlela enamandla yokuhambisa amava esiko aguqukayo.
tags: aiUmncedisi we-aikukubhadla okungeyonyaniBotBotcoBotco.aincokolaiarhente yencokoincoko umncedisiyokuthengisa incokoincoko ekhulisaingxoxoyokuthengisa
URebecca Clyde ngumseki-siseko kunye ne-CEO yeBotco.ai, isiqalo esinikezela ngengxoxo ekrelekrele yokukhulisa abathengi bezempilo. Ngaphezulu kweminyaka engama-20 kwintengiso yedijithali kwishishini lobuchwephesha, unomdla wokuqhubela phambili abasetyhini kubuchwephesha kwaye wakhonza njengomlawuli olawulayo ngokubambisana waMantombazana kwiTech Phoenix iminyaka emi-3. Phambi kweBotco.ai, uRebecca waseka iarhente yentengiso yedijithali, i-Ideas Collide, ngoku ikunyaka wayo we-15 ukhonza abathengi bamashishini kwihlabathi liphela. Wayekade engumphathi wentengiso kwi-Intel kwaye ubambe i-MBA kwiYunivesithi yaseArizona State.